Kani waa iskoolka iswiidhishka ah - Utbildningsguiden
› Kani waa iskoolka iswiidhishka ah
Kani waa iskoolka iswiidhishka ah
(Det här är den svenska skolan på Somaliska)
Laga billaabo marka uu ilmuhu 1 sano buuxiyo wuxuu dhigan karyaa dugsi Xannaanada. Dhigashada dugsiga xannaanadu maaha mid khasab ah. Laga billaabo deyrta uu ilmahaagu buuxinayo seddax sano wuxuu ilmuhu xaq u leeyahay dugsiga xannaanada ee guud. Dugsiga guud ee xannaanada waxaa la dhigan karaa 15 saacadood usbuuciiba, waana lacag la’aan. Dugsiga xannaanada wuxuu ilmuhu fursad ugu helayaa in uu horuumar sameeyo, uuna ciyaar-ciyaar iyo wax abuurid wax ku barto, isagoo iskiis wax u sameynaya, isagoo koox ku jira iyo isagoo wadajir ahaan wax ula sameynaya dad waaweyn
Waajib ayey carruurta ku tahay laga billaabo marka ay 6 sano jiraan in ay billaabaan fasalka dugsiga xannaanada. Fasalka dugsiga xannaanada ka dib waxay carruurtu billaabayaan dugsi hoose-dhexe ama qaab iskool oo udhigma. Ardayda u dhexeysaa 6 iyo 13 sano waxay aadi karaan guriga xilliga firaaqada oo furan waqtiga iskoolka ka hor iyo ka dib iyo fasaxyada iskoolka, guriga xilliga firaaqaduna wuxuu bixinayaa hawlo dhaqdhaqaaq oo micno weyn ugu fadhiyo carruurta marka ay waaliddiintu shaqeynayaan ama waxbaranayaan.
Waxbarashada dugsiga hoose-dhexe waajib ayey carruurta oo dhan ku tahay. Iswiidhan waxaa ka jira waajib iskool dhigasho oo ku aaddan fasalka dugsiga xannaanada iyo dugsiga hoose-dhexe fasallada 1-9, micnaha muddo 10 sano ah.
Markaas ka dib waxay dhallinyarada badankoodu dhigtaan dugsi hoose sare. Haddii aad Iswiidhan ku cusubtihid, aadna heshay sharci degganaasho oo joogto ah xaq baad u leedahay in aad billawdid waxbarasho dugsi sare haddii aad ka gaartid in aad billawdid inta lagu jiro xilli dugsiyeedka guga ee sanadka aad 20 sano buuxineysid. Haddii aad megenlyo doon tihid waxaad xaq u leedahay in aad billawdid waxbarasho dugsi sare inta aadan buuxin 18 sano, laakin waxaa leeska rabaa in la haysto shahaaddo la oggolyahay. Dugsiga sare wuxuu qofka u diyaarin karyaa in uu toos shaqo u billawyo, ama in uu waxbarasho ka sii wato jaamacadda xirfadaha ama jaamacad.